Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo difaacay tallaabada uu uga soo horjeestay DF Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo difaacay tallaabada uu uga soo horjeestay DF Soomaaliya
Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo difaacay tallaabada uu uga soo horjeestay DF Soomaaliya
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) ayaa difaacay tallaabada uu uga soo horjeestay juhdiga ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ku bixinayso dhismaha Maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug ayaa Sabtidii magacaabay guddi doorasho, kaasoo sida uu sheegay ka shaqayn doono Doorashooyinka Baarlamaanka iyo midda Madaxtooyada ee Galmudug.
Madaxweyne Xaaf oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da, waxna laga weydiiyay sida ay laba guddi doorasho uga wada shaqayn karaan dhismaha Galmudug ayaa sheegay inaanay Dowladda Federaalka wax shaqo ah ku lahayn arrimaha Galmudug.
“Dowladda Federaalka halkan shaqo kuma laha, dastuurkana ma qoraayo, wixii aan dastuurka qoreyna ciddii ku tallaabsata ayadaa dhibaato samaynaysa. Mark anaga dhib ma rabno.” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Madaxweynaha ayaa tibaaxay, ka dib markii ay arkayn sida aan loogu qanci karin waxa ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb uu isaga iyo kooxdiisuba u istaageen badbaadinta Galmudug.
“Odayaashii iyo wixii meesha joogay iyo sida ay wax u socdaan wax fiican maaha. Waxaa na keenay anaga, aniga iyo raggeyga waxaa weeye in wax badan oo khaldan, oo aan aragnay inaysan Galmudug dan u ahayn oo meesha ka socda inaan saxno.” Ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Madaxweyne Xaaf ayaa intaa ku daray “Marka waa inaan badbaadino Galmudug oo Xildhibaano anfacaya iyo dowlad aan gacan ku rimis ahayn oo dowlad dhab ah oo dalku rabo inay noqotaa doonaynaa.”
Doorashada Galmudug ee lagu wado inay ka qabsoomto Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa hareeyay khilaaf xoogan, gadoodka Xaaf-na wuxuu sii huriyay dabkii ku shidnaa dhismaha doorashadan.
Villa Soomaaliya ayaa inta badan lagu eedeeyaa mid ka masuul ah khilaafka wiiqay habsami socodka doorashada Galmudug, sababo ku aadan iyadoo uu ujeedkeedu yahay, sidii ay hoggaan iyada taageersan uga hawlgelin lahaa Gobolada Dhexe.
difaacay tallaabada uu uga soo horjeestay
juhdiga dowladda ku bixineyso dhismaha Galmudug